वास्तु टिप्स : भुलेर पनि घरमा नराख्नुहोस् यी चीज, सम्बन्धमा आउन सक्छ फाटो | वास्तु टिप्स : भुलेर पनि घरमा नराख्नुहोस् यी चीज, सम्बन्धमा आउन सक्छ फाटो |
वास्तु टिप्स : भुलेर पनि घरमा नराख्नुहोस् यी चीज, सम्बन्धमा आउन सक्छ फाटो
उज्यालो प्रतिनिधि १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार शिक्षा
काठमाडौँ । वास्तु शास्त्रका अनुसार घरभित्रका चीजहरू मात्र होइन घर वरिपरिका चीजहरूले पनि वास्तु दोष निम्त्याउँछ। वास्तु दोषका कारण घरमा बस्ने व्यक्तिको शारीरिक, वित्तीय, मानसिक र पारिवारिक जीवनमा सम्बन्धित समस्याहरू बढ्न थाल्छन्। यी चीजहरू जसलाई भुलेर पनि घरमा राख्नु हुँदैन।
भाँचिएको वा बिग्रिएको चीजहरू घरमा राख्नु हुँदैन । बजारमा त्यस्ता धेरै सजावटका सामानहरू पाईन्छन जुन देख्दा राम्रो देखिन्छ तर तिनीहरू भाँचिएको वा बिग्रिएको पनि हुन सक्छ । यदि तपाई त्यस्ता चीजहरू घरमा राख्नुहुन्छ भने सम्बन्धमा फाटो आउन सक्छ। साथै त्यस्का नकारात्मक ऊर्जा घरले आर्थिक स्थिति बिगार्न सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... राहतका लागि विद्यालयद्वारा महानगरपालिकालाई ९० बोरा चामल उपलब्ध
१. घरको उत्तर र पूर्वमा फोहोर कहिल्यै जम्मा नगरनुहोस । साथै उत्तर र पूर्वमा कुनै पनि प्रकारको भारी मेसिनहरू नराख्नुहोस्। अन्यथा तपाईंको घरमा विशाल दोष पैदा गर्न सक्दछन्।
२. यदि तपाईंको घरको अगाडि काँडादार बोटबिरुवाहरू वा दुध आउने बोटहरू छन् भने तिनीहरूलाई तुरून्त हटाउनुहोस्। किनभने यसले परिवारका सदस्यहरूको बिचमा मतभेद बढाउँदछ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि अक्षयकोष
३. घरमा घोडाको पेन्टिङ, बाँझो जमीन, पहाड, भग्नावशेष इत्यादिको चित्र बनाउँदा वास्तुको नियमहरू पालना गर्नु आवश्यक छ। त्यस्ता विषयहरूमा बनाइएका चित्रले घरमा नकारात्मक उर्जा प्रसारित गर्दछ।
४.नक्कली प्लास्टिकको फूलहरू वस्तु अनुसार घरमा राख्नु हुँदैन। त्यस्ता फूलहरू देख्दा मन आशान्त हुन्छ।
५.घरको अगाडि डस्टबिन राख्नु वास्तुमा अशुभ हुन्छ। यसले गम्भीर बिरामी र परिवारका सदस्यहरूलाई विपत्ति निम्त्याउँछ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... केराको बोक्रामै यति धेरै गुण,यस्ता छन फाईदाहरु
६. वास्तु दोषबाट छुटकारा पाउन तपाईले घरमा ९ दिनको लागि रामायणको पाठ गर्नुहोस । घरको उत्तर-पूर्वी कुनामा एउटा कलश राख्नुहोस् र यदि कलश माटोको छ भने, यो उत्तम हुनेछ।
७. घरको हलमा वा तपाईं जहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ पर्वतको पछाडि तस्वीर राख्नुपर्दछ । यस्ले तपाईको आत्मविश्वास र इच्छाशक्ति बढ्नेछ।
तलब नपाएपछि बैतडी सिगासमा कार्यरत शिक्षक आन्दोलित
वैकल्पिक प्रणालीमा ६४ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावहीन :